Nwaleenụ Livefyre Sidenote maka ịza ajụjụ | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 17, 2014 Douglas Karr
Anyị agagharịla n'etiti usoro ịza ajụjụ ugboro ole na ole na Martech Zone. Na ihu ọma, nyiwe niile ga - emekọrịta ihe (anyị anaghị eji ha ma ọ bụrụ na ha anaghị). Nkwupụta na-aghọ isiokwu n'oge a ebe ọ bụ na spam na-ekwu okwu dị ọtụtụ na ọtụtụ mkparịta ụka kachasị mma na-eme na-anọghị n'ịntanetị, na-eduga ụfọdụ blọọgụ buru ibu iji gbanyụọ ịza ajụjụ kpamkpam.
M na enyi Lorraine Ball nọ na onye a kwuru, sị:
Maka m, blog na-enweghị azịza dịka ụlọ akwụkwọ na-enweghị ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ egwu na-enweghị ndị na-ege ntị. Nye m, itinye aka na mmekọrịta gị na ndị na-agụ akwụkwọ bụ njiri mara nke ịde blọgụ, yana n'ezie uru ya kachasị maka onye na-ede blọgụ.
Anaghị m enwe mmasị ịhapụ usoro n'ihi ya ọtụtụ anaghị arụ ọrụ. Enweghi otutu okwu banyere post ọ bụla Martech Zone, ma mgbe enwere ya dị m mkpa oge niile. Achọghị m ịma na m ga-edozi otu puku okwu spammy iji gwuo ma chọta otu akpa - ọ ka bara uru.
Nke ahụ kwuru, ebe ọ bụ na ọtụtụ mkparịta ụka na-eme na ntanetị - Achọrọ m ka ndị na - agụ akwụkwọ anyị chọta ma sonyere mkparịta ụka ndị ahụ. Disqus nwere ụfọdụ atụmatụ mara mma iji soro ibe gị mana ọ dabara adaba mkpa ịmata onye na mgbe a na -ekọrịta ma na-ekwu maka ọdịnaya ahụ. M kwuru na a na mkparịta ụka na Nicole Kelly o wee kwuo nke ahụ Livefyre mere ya - yabụ aga m enye usoro ha ihe ọzọ.
Ha kwukwara Ntinye ederede - uzo isi jidere nkwuputa ma obu akuko ma kwuo ya na obodo ma obu ndi mmadu. Yabụ - ikwu okwu abụghị naanị ihe ị na-eme mgbe ị gụchara otu post, ugbu a ị nwere ike itinye mkparịta ụka gị n'ime ọdịnaya ahụ!
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, mee ka m mara! 🙂
Tags: blog kwurucommentịza ajụjụDisqusUchendu